Gị Checklist ka Ezigbo Mobile anabata Email Kere | Martech Zone
Onweghi ihe na - emechu m ihu dịka mgbe m na - emepe ozi email nke m na - atụ anya na ngwa mkpanaka m na - enweghị ike ịgụ ya. Ma ihe oyiyi a bụ akara ngosi echekwara echedo nke na-agaghị aza na ngosipụta ahụ, ma ọ bụ ederede dị oke obosara nke na m ga-agagharị na azụ iji gụọ ya. Ma ọ bụrụ na ọ dị oke egwu, anaghị m echere ịlaghachi na desktọọpụ m ka m gụọ ya. M na-ehichapụ ya.
Ọ bụghị naanị m - ma ndị na-azụ ma azụmaahịa na-agụ ihe karịrị ọkara nke ozi ịntanetị ha na ntanetị pere mpe ugbu a. Imewe nzaghachi email dị oke egwu ka email gị pịa-site na ọnụego.
Ebe ọ bụ na anyị mejuputara ozi ịntanetị na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọrụ email ọ bụla, anyị na-agakarị ndị otu ahụ wee nye aka. Enweela m eziokwu n'eziokwu. Ọ dị oke njọ - ha na-akwụ ụgwọ maka ikpo okwu iji zipu ozi-e na ọ nweghị onye na-agụ. Na-agbanwe agbanwe gị email template dị mfe iji zie ezi. Chegodi ije ije na ngwa nbipute n'ebe oru gi ma tufuo okara akwukwo… nke ahu bu ihe ị na eme mgbe ị nwetaghị ozi ịntanetị gị.
Omume kachasị mma apụtawo n'ọma ahịa a. Nzaghachi na-emeghachi omume adịghị mfe - mana ọ gaghị ekwe omume, kwa. Anyị enweela ndị mọnk na Email Monks na-enyere anyị aka ma ha soro usoro nyocha a egosipụtara iji bulie ozi ịntanetị gị iji hụ na ọ na-anabata ekwentị na mbadamba mbadamba.
Chepụta na otu kọlụm
Chepụta na mkpịsị aka n'uche
Nọgidenụ na- Kpọọ ka emee mfe tappable (44px kacha nta)
Jiri oghere ọcha maka skimming dị mfe
Debe nkụnye eji isi mee ọcha
Na-ebuli amuma mkpebi maka ngosipụta retina
Emela ka njikọta ọnụ, jiri bọtịnụ
Nye nọmba ekwentị jikọtara
Debe usoro isiokwu ruo mkpụrụedemede 30 ma ọ bụ obere
Jiri obosara onyogho nke opekata mpe nke 480px ka ha ghara ihie mgbe agbatị na ekwentị
Emela ka ihe onyonyo buru ibu, jiri nyocha CSS
Machibido elu - mkpumkpu ozi ịntanetị na-adị mfe skim
Debe Oku dị mkpa iji mee ihe n'elu ogige ahụ
Nwaleenụ gị email aghụghọ gafee ndị ahịa email
Tags: nyochaemail na-anabata ozi ịntanetịnyocha ederede emailimewe ozi emailnyocha ederede imewe email
Mmiri ozuzo Tan
Ọkt 2, 2015 na 1:15 AM
Nke a bụ n'ezie ihe dị egwu na niche ederede Douglas! Amụtara m ọtụtụ ihe na nke a.
Imirikiti isiokwu na-ekwu maka imewe ihe ntanetị weebụ, nke a bụ oge 1st m na-agụ gbasara imewe email. Ndụmọdụ dị ịtụnanya na usoro ị tinyere n’ebe a. Kedu sọsọ ahịa ịre ahịa email ị jiri?
Ọkt 2, 2015 na 2:54 AM
Anyị na-eji nke anyị CircuPress nke mere na anyị nwere ike iwekọta weebụsaịtị WordPress anyị na ozi ịntanetị anyị!